Products Manufacturers |China Zvigadzirwa Suppliers & Factory
GDQH-31W Inotakurika SF6 Gasi Recovery Device
GDQH-31W Inotakurika SF6 Gasi Recovery Device (MINI) inoshandiswa mukugadzira chirimwa cheSF6 gasi insulated magetsi emidziyo uye kushanda & madhipatimendi ekutsvagisa sainzi kuzadza michina yemagetsi neSF6 gasi uye kudzoreredza SF6 gasi kubva kumidziyo yemagetsi yakashandiswa kana kuedzwa.
Panguva imwecheteyo, inonatswa uye inomanikidzwa uye inochengetwa mutangi yekuchengetedza.Inokodzera ring network yekugovera network pazasi 50kV.
GDSL-A Series 3-phase Primary Current Injection Test Set ine Temperature Test ndiyo yakanakira midziyo yekuyedza yakakwira-ikozvino muindasitiri yemagetsi nemagetsi, inoshandiswa mumagetsi emagetsi, nzvimbo dzekugovera magetsi, kugadzira magetsi uye masangano ekutsvagisa, ane maficha. yehukuru hudiki, huremu huremu, kushandisa nyore uye kugadzirisa.
Mudziyo uyu mudziyo wakakosha wekuita bhatiri-regulated lead-acid bhatiri ine bhatiri voltage ye2V, 6V, kana 12V uye inodzokera kumashure nekuda kwe sulfide crystallization ye electrode plate.
GDYN901 yakakodzera kuona kinematic viscosity yemvura petroleum zvigadzirwa.Ichi chishandiso chine basa rekuita nguva yekuyedzwa sampuli kufamba uye inogona kuverenga mhedzisiro ye kinematic viscosity.
Onsite AC magetsi emagetsi
Iyo GDUP-1000 ndeye inotakurika yakachena sine wave pane-saiti AC bvunzo magetsi.Iyo inozivikanwawo se-on-saiti AC uye DC bvunzo magetsi emagetsi, AC uye DC echimbichimbi magetsi, munda bvunzo magetsi, mbozha bvunzo magetsi.